यदि तपाईं प्रसिद्ध टेलिभिजन हास्य श्रृ series्खलाका अनुयायी हुनुहुन्छ, जुन सीबीएसले years बर्ष अघि (सेप्टेम्बर २०० in मा) प्रीमियर गर्‍यो भने निश्चय पनि तपाई " बिग बैंग थियरीको बारेमा नचिनेका कुराहरु " मा चासो राख्नुहुनेछ र हामी यसमा व्याख्या गर्छौं। पोष्ट
कमेडीको लागि सुरुमा शीर्षक दिइएको शीर्षक "लेनी, पेनी र केनी" थियो।
दुई मुख्य पात्रहरु (शेल्डन र लियोनार्ड) का नाम शेल्डन लियोनार्ड, अभिनेता, निर्देशक र पटकथा लेखक, जो १ 1997 1997 in मा लस एन्जलसमा मरे, र जो पनि एक भौतिक विज्ञानीलाई सम्मान गर्दै छनौट गरिएको थियो।
के तपाई मध्ये कोही एमीको अनुहार बज्दछ? यो उही अभिनेत्री मईम बियालिक हो जसले "ब्लासम" को चरित्रलाई जीवन दियो। यो उत्सुकता हो कि अभिनेत्री वास्तविक जीवनको न्यूरोबायोलोजिस्ट हो।
शेलडनले ढोका ढकढक्याउँदा kn नाक दिने चलन श्रृंखलाको अध्याय १० बाट स्थापित भएको थियो।
यो उत्सुकतापूर्ण छ कि अभिनेता जिम पार्सन (शेल्डन) ले स्वीकार गरे कि उनले स्टार्क ट्रेक (कथालाई कल्पना गर्ने श्रृंखला) हेरेनन।
यस श्रृंखलामा एक मात्र मुख्य चरित्र छ जसको अन्तिम नाम अज्ञात छ। यो छिमेकीको पैसाको बारेमा हो। यो, जसले अभिनेत्री काली क्युको मूर्त रूप लिन्छे, चौथो सत्रको केहि एपिसोडहरूमा देखा पर्न सकिनन्, किनकि युवतीले उनको खुट्टा भाँचे।
शेल्डन मन पराउने र गाईनु पर्ने लुल्लबी “मीठा किट्टी” दु: खी वा बिरामी भएको बेला गाईनु पर्ने भनेको "न्यानो किट्टी" को रूपान्तरण हो जसका लेखक एडिथ न्यूलिन हुन्।
यदि त्यहाँ त्यस्तो व्यक्ति, जसले सेलिन वा वीणा जस्ता उपकरणहरू खेल्दछ भन्ने फेला पर्‍यो भने, यो पत्ता लाग्यो कि दुबै जिम पार्सन (शेल्डन), जोनी गालेकी (लियोनार्ड) र मयिम बियालिक (एमी) मात्र उनीहरूले श्रृंखलामा खेल्दैनन्। तिनीहरू वास्तविकतामा गर्छन्।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, श्रृंखलामा कलाकारहरूले वैज्ञानिक प्रयोगहरूको धेरै प्रयोग गर्दछन्। को रूपमा बाहिर को रूप मा तिनीहरू वास्तविक हो! उनीहरूको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डेभिड साल्टबर्गको सुपरिवेक्षण छ।
सिनेमाको संसारमा प्राय: जे हुन्छ, त्यसको विपरीत, पेनीले लियोनार्डलाई प्रेम गर्ने घोषणा पहिलो पटक फिलिममा बसाइएको थियो, जब निर्देशकले यसलाई "अपराजेय!" भनेर इन्साफ गरे।
शेल्डन कूपरलाई जिन्दगीमा पुर्‍याउने अभिनेता, जिम पार्सनले वास्तवमा माइक्रोसफ्ट साइडवाक कम्पनीको लागि हस्टनमा काम गरिसकेका थिए।
श्रृंखला विभिन्न क्षेत्रका हस्तियों द्वारा भ्रमण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, हास्य पुस्तक लेखक स्टेन ली, क्याप्टेन अमेरिका, वा अभिनेता लियोनार्ड निमोय, जर्ज टेकई, ब्रेंट स्पिनर र स्टार ट्रेकको लेभर्ट बर्टन जस्ता चरित्रहरूका अन्य कलाकारहरू बीच रचनाकार। तिनीहरू २०० George मा फिजिक्समा नोबेल पुरस्कार जर्ज स्मुट, माइकल जे। मसिमिनो, नासाका इन्जिनियर र अन्तरिक्ष यात्री, र स्टीफन हकिंग पनि देखा परेका छन्।
यी उत्सुकताहरू हुन् जुन श्रृंखलामा सामान्यतया परिचित छैनन्। त्यसकारण हामीले बिग बै Bang थियरीको बारेमा तपाईंलाई थाहा नहुने चीजहरूमा तिनीहरूलाई उठाउन चाखलाग्दो भयो । केहि चाखलाग्दो छन्, र अरूहरू अचम्मलाग्दो। जे भए पनि, यदि तपाईं प्रशंसक हुनुहुन्छ, म पक्का छु तपाईको रूचि छ, वा त्यसैले हामी आशा गर्दछौं ... टिप्पणीहरू स्वागत छ!
युद्धमा हराएको अभिनेताहरू
सबैभन्दा उपयोगी विन्डोज किबोर्ड शर्टकटहरू
सेलिब्रेटीहरू अघि र पछाडि